Iingozi ezinomdla kunye nePokémon Yiya kuthintela | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | Izaziso
I-Pokémon Go iguqukele ekubeni ngumkhuhlane oyinyani kunye nophindaphindayo. Yonke imihla sifumana iimeko ezintsha nezinqabileyo malunga nendlela iPokémon Go ebachaphazela ngayo abasebenzisi kwihlabathi liphela kuzo zonke iindawo. Inyani yile yokuba iPokémon sisigigaba sokuhlala ixesha elide, oku akubangeli abantu abancinci kuphela kunye nabantwana ukuba babandezeleke ziziphumo zokuba likhoboka lomdlalo wabo, inani elibalulekileyo labantu abaphakathi kweminyaka engama-25 nengama-35 ubudala bakhule ngokwenyani nale ncinci izilo zedijithali. Inkampani ebalulekileyo ye-aeronautical isandula ukuxhoma iipowusta ezithintela i-Pokémon Yiya kubasebenzi bayo, ayisositya sinencasa elungileyo ukuba bachitha iiyure zomsebenzi bedlala ngeselula yabo. Kodwa Namhlanje siza kwenza ukudityaniswa kwazo zonke iimeko ezinomdla apho iPokemon Go ingumtyholwa.
Inkampani esithetha ngayo yiBoeing, kwaye ayikhawulelanga ekuxhonyweni kweepowusta kuyo yonke indawo yokugcina, kodwa ikwathumele ii-imeyile kubasebenzi ukuze baqinisekise imigaqo. Ayisiyiyo kuphela inkampani enkulu yase-US enyanzelwe ukuba "inqande" i-Pokémon Yiya kumaziko ayo, oko kukuthi, kubasebenzi. Ezinye iindawo ezinjengeemyuziyam ziyajoyina eli nyathelo, kunokuba yinto ecaphukisayo ukubona abasebenzi bezingela iPokémon kwindawo yenkcubeko. Le ibiyile imeyile ithunyelwe kubasebenzi beBoeing.
Ngenxa yokuthandwa kwePokémon Go kwaye abasebenzisi abayazi ukuba akufuneki basebenzise iPokémon Go emsebenzini (sivile ngomsebenzisi owenzakeleyo edlala umdlalo) sigqibe kwelokuba sisabele kwaye sikhubaze ukufakwa kwePokémon Yiya ngaphakathi zonke izixhobo. Sifumene kufakelo lwe-100 olusebenzayo lwesicelo. Uluhlu olumnyama luza kucima nasiphi na isicelo esicinga ukuba siyingozi kwisixhobo, ngoku siyiPokémon Go.
Ayisiyo eyokuqala kwaye ayisayi kuba yeyokugqibela kwiinkampani ukuthatha eli nyathelo, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ukuba aba basebenzisi basifakile isicelo kwizixhobo zenkampani.
Ngakumbi ukwazi i-Pokemon Iya kwiingozi
Siza kwenza uphononongo oluncinci malunga nezinto ezenzekileyo emva kofakelo lwePokemon Go, kwaye yile yokuba sele siphantse sanencwadi. Okokuqala sifumana ixhoba, indlu yakhe, eyayisakuba yiCawa, okwangoku yindawo yokuzivocavoca yePokemon. U-Boon Sheridan ovela eMassachusetts wabona abantu abaninzi ngakumbi nangakumbi bejikeleza indlu yakhe, kwaye waqala ukucinga ukuba ulahlekelwa yingqondo. Kamva wakufumanisa kwenzekani, Ikhaya lakhe lalichongwe njengendawo yokuzivocavoca yePokémon.
Ukuhlala kwiCawe endala kubandakanya izinto ezininzi. Namhlanje, ikhaya lam yindawo yokuzivocavoca yePokémon. Oku kufanele ukuba kunomdla ...
Kodwa ayisiyiyo kuphela yabantu abaqhelekileyo abachaphazeleka yile fever, e-Australia, isikhululo samapolisa saphinda sahlaselwa ngabantu abancinci ababeleqa i "Sandshrew", enye i-Pokémon enomdla. Amapolisa alumkisa ngoFacebook ukuba akazukuvumela abantu abancinci ukuba bangene, kwaye mabathathe wonke umntu esitratweni, nangona bebeyithatha benoburharha obaneleyo, asifuni nokucinga ukuba bangabaseMntla Melika .. .
Akufanele ungene kwisikhululo samapolisa kwaye kufuneka ulumke xa uwela izitrato. Isandrew ayiyi ndawo okwangoku. Hlala ukhuselekile kwaye ubambe konke!
Ukuqhuba kunye nePokémon Go yinkampani embi, kwaye kuya kufuneka uyiphephe kuzo zonke iindleko. Amapolisa ase-Australia eNew South Wales ahlawulise abaqhubi ababini ukuza kuthi ga kule veki ngokudlala iPokémon. Ityala liye lamlahla lowo unetyala Iidola ezingama-325 kunye namanqaku ama-4 elayisensi yakhe yokuqhuba.
Okokugqibela, umAmerika owahlukileyo ozinikele kuye ukuzingela "iPidgey" kanye njengokuba umfazi wakhe wayesele eza kungena kwigumbi lokuhambisa, Yile ndlela ihambe ngayo. Ifoto yaba yintsholongwane (yintloko yeli candelo) ngaphezulu kwezigidi ezi-3 zokutyelelwa e-Imgur, kwaye yayihamba nalo mbhalo ulandelayo:
Xa umfazi wakho sele eza kuba nosana kwaye i-Pokémon iyavela kwaye kuya kufuneka ubambe isitshixo esisezantsi…
Wayithatha ngokuhlekisa kunye nokuzola, ukongeza, kamva wathumela omnye umfanekiso kunye nonyana wakhe emva kokuzalwa kwakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Iingozi ezinomdla kunye nePokémon Go ziyathintelwa kwiiveki ezintathu kamva
Yonke imihla abantu baqhelekile. Kuyamangalisa!
Umongameli wase-Turkey u-Erdogan uthetha neSizwe nge-FaceTime ngexesha loGqatso